iPhone 7+PlusiPhone7iPhone 6s iPhone6အား မန္တလေး တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
iPhone 7+PlusiPhone7iPhone 6s iPhone 6
ရောင်းချသူ: Wa Na
ကြည့်သူအရေအတွက်: 340 (+1)
SPECIAL ONE SECOND MOBILE မှ
APPLE Official လေးများရောင်းပေးပါအုံးမည် ..
iPhone 7+Plus . 256GB . စက်ရှယ်သန့် . ပစ္စည်းစုံ
Finger & Battery Good . Official Unlock
No Error . No iCloud . Jet Black
ဈေး ___ 850000 Ks
iPhone 7+Plus . 128GB . စက်ရှယ်သန့် . ပစ္စည်းစုံ
No Error . No iCloud . Jet Black & Red Product
ဈေး ___ 810000 Ks
iPhone7. 128GB . စက်ရှယ်သန့် . ပစ္စည်းစုံ
No Error . No iCloud . Jet Black & Rose Gold
ဈေး ___ 580000 Ks
iPhone 6s . 64GB . စက်ရှယ်သန့် . ဘူးပစ္စည်းစုံ
No Error . No iCloud . Rose Gold & Gray
ဈေး ___ 360000 Ks
iPhone6. 64GB . စက်ရှယ်သန့် . ဘူးပစ္စည်းစုံ
No Refur . No Error . No iCloud . ရောင်စုံရှိ
ဈေး ___ 290000 Ks
iPhone6. 16GB . စက်ရှယ်သန့် . ဘူးပစ္စည်းစုံ
ဈေး ___ 260000 Ks
Original Display /Original Body/ Official Second
Game & Apps များစွာထည့်ပေးသည် ....
Apple ID လက်ဆောင်ထည့်ပေးသည် ...
Error အာမခံဖြင့် ရောင်းချပေးပါသည်....
Error ပါလျှင် ငွေအပြည့်ပြန်အမ်းမည်...
SPECIAL ONE MOBILE
SECOND HANDSET အာမခံရောင်းဝယ်ရေး
36လမ်း × 74လမ်းထောင့် ၊ မန္တလေးမြို့။
09 - 4599 18885
09 - 4599 18886
09 - 910 57094
mimax Ram3,64gb. 98%အသန့်​ ph on...
အမည်: iPhone 7+PlusiPhone7iPhone 6s iPhone 6